Abavelisi bamazinyo baseChina abenzi beebhakethi kunye nabathengisi | UMCINI
Amagqabantshintshi eBucket / Izinyo eligqibeleleyo 1.Izinto ezilungileyo zensimbi 2. Nxiba, ubungqina kwaye bomelele elityeni, ezantsi nzima, ilitye 3. Imbonakalo egudileyo 4. Mthubi, mnyama, luhlaza njl.ukhetho 5. Zonke iintlobo zeentlobo kunye nobunzima obahlukeneyo ukhetho
Izixhobo ezibandakanya umhlaba zikhusela iindawo ezibizayo kwiibhakethi zakho kwaye ubomi obude buyehlise iindleko zokugcina. Excavator emele izinyo nayo idlala indima enkulu ekumiseleni ukuba umatshini wakho uqhuba kakuhle kangakanani kwisicelo esithile.
Amandla okubonelelaAmandla okubonelela:500000 Ton / Iitoni Inyanga nganyeUkupakisha kunye nokuhanjiswaIinkcukacha Packaging: Iibhokisi zomthiIzibuko: Qingdao, Lianyungang, ShanghaiIxesha lokukhokhela :
Est. Ixesha (iintsuku)
Ukucaciswa kwamazinyo ebhakethi:
Izinto: Isinyithi seCarbon, ingxubevange yentsimbi, njl, ezinje ngeT1, T2, T3, T4.
Uhlobo Machine: Excavator, ivili Loader, ugandaganda, njl.
Uhlobo: ZONKE IIMPAWU
Unyango Ubushushu: Ukucima kunye nokunyanga unyango
Ukuqina: Amazinyo: HRC48-52, Impembelelo yexabiso> = 16J; Iiadaptha: HRC34-38, Impembelelo yexabiso> = 25J
Imeko yomsebenzi: ngobude obugqwesileyo kunye namandla eqine, kufanelekile kakhulu kwiimeko ezininzi ezahlukeneyo zomsebenzi onzima.
Iinkcukacha zamazinyo ebhakethi:Sibonelela ikakhulu iindawo zokucoca ze-Excavator. Njenge-excavator rock bucket, i-excavator sieve bucket, i-excavator ye-bucket amazinyo, i-excavator ripper, imiphetho yokusika, i-excavator coupler ekhawulezayo njalo njalo. Uphawu esinokubonelela ngalo lonke uhlobo. Imarike yethu ikakhulu lihlabathi liphela, njenge-USA Canada, Mzantsi Afrika, iBrazil, iChile, i-Egypt, iSudan, iSingapore Middle East. njl ngokukodwa kwiindawo zoomatshini bokwakha ezifana namazinyo ebhakethi, isixhobo sokumba, ukusika imiphetho, isixhobo sokukhupha ngokukhawuleza kunye nokunye. Isixhobo: Ikhabhoni yentsimbi, ingxubevange yentsimbi, njl. ixabiso> = 16J; Iiadaptha: HRC34-38, Impact value> = 25J Imeko yokusebenza: ngobude obugqwesileyo kunye namandla eqine, ilunge kakhulu kwiimeko ezininzi zokusebenza nzima.
Sinokubonelela ngolu hlobo lubanzi lwe-Excavator Bucket Teeth:
Imveliso yeMveliso1.Ukuveliswa kweTekhnoloji: UkuJonga ngokuQinisekileyo2.Izixhobo: Ingxubevange yentsimbi3. Ukuchaneka kweemveliso zethu ngokuchanekileyo kusetyenziswa inkqubo yokuphosa i-wax emanzi, ulawulo oluzenzekelayo lonyango lobushushu, ipeyinti emanzi yokutshiza kunye nenkqubo yokuzomaUncedoAmava eminyaka emininzi kwimveliso yoomatshini benjineli.Intengiso yethu enkulu: iChina iphela, uMbindi Mpuma, iAfrika, uMzantsi Afrika, iMelika njl.Ayithengisi kuphela imveliso, kodwa inokuyila njengesicelo somthengi.4. Uluhlu olubanzi lweempahla. Ephuzi, eluhlaza, umbala wokhetho.5. Umgangatho uqinisekisiwe ngabanezakhono abasebenzi, umqeshwa onyanisekileyo kunye neqela leQC.6. Ixabiso leFektri, ubunjani obuphezulu, inkonzo yobungcali.7. Singabeka eyakho logo kunye nemveliso kwimveliso ngobuninzi.Ixesha lokuhambisa elifutshane: iintsuku ezingama-30 kwisitya se-20ft.
Buza uphendulwe Q: Ngaba uthengisa inkampani okanye umenzi?A: Singabantu mveliso.Q: lide kangakanani ixesha lokuhambisa kwakho?A: Ngokubanzi ziintsuku ezi-5-10 ukuba iimpahla zisesitokhweni. okanye ziintsuku ezili-15 ukuya kwezi-20 ukuba iimpahla azikho estokhwe, kuxhomekeke kubungakanani.Q: Ngaba unika iisampulu? isimahla okanye yongezelelweyo?A: Ewe, sinokunikela isampuli simahla kodwa musa ukuhlawula iindleko zothutho.Q: Yintoni na imiqathango yakho intlawulo?A: Intlawulo <= 1000USD, 100% kwangaphambili. Intlawulo> = 1000USD, 30% T / T kwangaphambili, ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa.
Qhagamshelana nathiUkuba uneminye imibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi apha ngezantsi:Wechat: +86 13270253222Indawo yewebhu: www.Iingcebiso: Singakwenza ukuba ube nelogo kunye nophawu oluninzi.Ulwaneliseko lwethu yeyona njongo yethu iphambili, wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi.
Egqithileyo excavator womeleze umhlaba emele
Okulandelayo: excavator coupler ngokukhawuleza